Running Man Myanmar Subtitles: July 2016
Guests: Block B's Zico, Yoo In Young, Hong Jin Young, Uhm Hyun Kyung, Kyung Soo Jin & Jo Bo Ah
Game တွေဆော့ပြီး အနိုင်ရတဲ့လူက Host လုပ် Center မှာနေရမှာပါ .
Screen ပေါ်မှာ ဘယ်သူတွေပေါ်လာမလဲ ဘယ်သူတွေကတော့ကိုယ်ပျောက်လူသားတွေဖစ်နေမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုပေးပါအုံး
☆P.S~ Jihyo က Garyကို Kyung Soo Jin နဲ့သ၀န်တိုတာ MC Fan တွေသိကျမှာပါ😁
အခုအပိုင်းမှာလဲGary နဲ့ KSJ ကိုတွဲပေးထားပါတယ် 😁
Jihyo Unnie ရဲ့မျက်နှာလေးဖတ်ကြည့်ကြပါအုံးလို့
အညွှန်းက Theint Yadanar Hlaing
ဘာသာပြန်​သူက SKL ENCODED Thomas Nicolas စာအ​သေတွဲပီးသား video​ဒေါင်းရန်​
<<< our page >>>
162 - King of Idols (Super Super HOT)
Idol တွေနဲ့ အဖွင့်အကမှ လန်ထွက်နေတယ်ဗျာ..
Translator အသစ် Zar Ni Linn ကဘာသာပြန်ထားတာပါ
Feedback လေးတွေရှိမှ လိုအပ်တာပြင်ရမှာပါ
Translator-Zar Ni Linn
စာတန်းထိုး video ဒီမှာနှိပ်​ပြီး​ဒေါင်း
Running Man Ep-308(Myanmar Subtitle)
Guest(s): Kim Hee-ae, Ji Jin Hee
​ဒီအပိုင်းမှာ မင်းသမီးကင်​ဟီအဲ က​အေးဂျင့်​ဖြစ်​ပြီးလျို့ဝှက်​မစ်​ရှင်​ထမ်း​ဆောင်​ရမှာပါ...
​နောက်​ပြီး သူမကိုကူညီမဲ့ သူတစ်​ဦးရှိပါတယ်​..
ပူပြင်းတဲ့​နွေရာသီမှာ ကြိုးစားပမ်းစားရိုက်​ကူးထားတယ်​လို့ သိရပါတယ်​..
ထုံးစံအတိုင်း အပိုင်းမျိုးစုံခွဲ ဂိမ်းမျိုးစုံကစားကြမှာပါ
ဘယ်​သူလဲဆိုတာ ကွကိုသာ​ဒေါင်းကြည့်​ ..
Running Man ကြည့်​၍ ရယ်​​မော​ပျော်​ရွှင်​​နေနိုင်​ကြပါ​စေ
Translate by -SKL
ENCODED BY- Mar Yar
video ​ဒေါင်းရန်​ (240mb) 540p
Running Man Episodes -298 (Myanmar Subtitle)
Guest(s): Go Ara, Kim Sung Kyun, Lee Je Hoon
သိပ်​ညွှန်းစရာမလို​တော့ပါဘူး..ပထမအပိုင်းမှာပြစ်​ဒဏ်​​ပေးမယ့်​ဟာပါ...​နောက်​ပြီး Yes Man နဲ့ No man မှာ No man ကိုရှာရမှာရမှာဖြစ်​ပါတယ်​...
ဘာသာပြန်​သူက​တော့ SKL ပါ
Encoded နဲ့ အညွှန်းက​တော့ Thomas Nicolas ပါ...
Running Man Ep-307 Myanmar Subtitle
(Summer MT Special Thumb Up Couple )
Guest(s); Shownu (Monsta X) , Sistar အပိုင်း၃၀၇ပါ။အမြန်​ဆုံကြည့်​ရ​အောင်​လုပ်​​ပေးထားပါတယ်​။​နောက်​ပြီး​ဝေဖန်​မှု​တွေများ​နေတယ်​လို့ကြားသိရပါတယ်။​
မမြင်ရတာကြာပြီဖစ်တဲ့ Couple Race လေးကို မကြာသေးခင်ကမှ မြန်မာနိုင်ငံကိုအလည်လာသွားတဲ့ Sister &amp; Monsta X က Shownu တို့က ဘယ်လိုအပြင်းအထန်ပြိုင်ဆိုင်ကြမလဲ။😍😍
ဘယ်သူတွေက အနိုင်ရပြီး ဘယ်​လိုဆုတွေသိမ်းပိုက်အုံးမလဲဆိုတာကို
Running Man Member တွေရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ဟာသလေးတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။👍👍👍
ဘာသာပြန်​သူက​တော့SKLပါ။Encodeက​တော့Thomas Nicolasကုတ်​​ပေးတာပါ။အညွှန်းက​တော့Theint Yadanar Hlaingပါ။
Running Man Race Start(game)
ဒီတစ်​ခါ​တော့ video​လေး​တွေ​စောင့်​ရတာ​ပျင်း​နေမှာစိုးလို့game​လေးတင်​​ပေးချင်​ပါတယ်​။gameနာမည်​ကRunning Man Race Startပါ။​တော်​​တော်​​ဆော့လို့​ကောင်းပါတယ်​။အရင်​ကနာမည်​ကြီးခဲ့တဲ့Subway Surfတို့Temple Runတို့လိုပုံစံမျိုးပါ။ဒါ​ပေမဲ့အဲ့ဒါ​တွေထက်​ဒီဂိမ်း​လေးကပိုသာပါတယ်​။ကဲ...ဘာ​တွေပိုသာလဲဆို​တော့ဒီဂိမ်းက graphic(ရုပ်​ထွက်​)အရမ်း​ကောင်းပါတယ်​။ဒါ​ကြောင့်​နိမ့်​တဲ့ဖုန်းအချို့မှာထစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ဒီဂိမ်းမှာကchapter​တွေလည်း​ရွေးနိုင်​ပါတယ်​။စစချင်းက​တော့ထုံစံအတိုင်းRace Starter​ဆော့ဂျင်​(Big Noise-အကိုနှာ​ခေါင်းကြီး)နဲ့စကစားရမှာပါ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အ​ကောင်​​တွေရလာမှာပါ။ပြီး​တော့ဒီဂိမ်းက​နေရာအလိုက်​ပါ။ဥပမာ-တရုတ်​​ရောက်​လိုက်​၊ကိုရီးယား​ရောက်​လိုက်​​ပေါ့။​ဆော့တာကျွမ်းရင်​၊ရမှတ်​များရင်​နဂါးဓာတ်​လုံး​တွေရပါတယ်​။ဒီ​လောက်​​တောင်​​ကောင်းတဲ့ဂိမ်းကိုRunnerတိုင်းကစားသင့်​ကြမယ်​လို့ထင်​ပါတယ်​။​နောက်​လည်းကစားလို့​ကောင်းတဲ့Running Manဂိမ်း​လေး​တွေတင်​​ပေးပါမယ်​။Don't Walk.But Run!! Running Man.
Running Man Race Start(85mb)[Direct Link]
ဒါကgame screen shot​တွေပါ။
Running Man Ep-214 Myanmar Subtitle
အပိုင်း၂၁၄ပါ။အပိုင်း ၃၀၇ မထွက်ခင်လေး ပျင်းနေမှာစိုးလို့ကြည့်​ရ​အောင်​တင်​​ပေးတာပါ။
လူအများသိကြတဲ့ လီရောင်ဂျေး.ရိမ်းပါဝင်တဲ့အပိုင်းပါ။..RM နဲ့ MLG ဆိုပြီးအဖွဲ့နှစ်​ဖွဲ့ခွဲပြီးယှဉ်​ပြိုင်​ရတာပါ။
နောက်ပြီး ရှုံးတဲ့အသင်းကထုတ်​ပယ်မဲ့သူကို မဲပေးပြီ ထုတ်ပယ်ရမှာပါ။ နောက်​ဆုံးပြိုင်ပွဲကတော့ စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်​။ဒါ​ကြောင့်​..သိပ်မညွှန်းတော့ပါဘူး​နော်​။ အရသာပျက်သွားမှာစိုးလို့..ပါ။ဘာသာပြန်​သူနဲ့​အညွှန်း​ရေးသူက​တော့Thomas Nicolasပါ။
Ep-214(Tubemate/Snaptube/Fb video downloaderတခုခုနဲ့​ဒေါင်းဘာ)
Running Man Ep-306 Myanmar Subtitle
Guest(s): Gyeong Ree, Nichkhun and Lee Ki Woo
ဒါပေမဲ့ အရင်က PD ပြန်ရောက်လာပါတယ်​။..သဲသောင်ပြင်မှာကစားရတာပါ။
ဂျယ်ဆော့တို့အသင်းနဲ့ ဂျုံးဂုတို့အသင်းဆိုပြီး အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲထားပါတယ်​။
အဲ့မစ်ရှင်ကို ဘယ်အသင်းက လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆိုတာ ကွကိုယ်သာဒေါင်းကြည့်ကြပါ။
အညွှန်းကတော့ Thomas Nicolas​ရေး​ပေးတာပါ။
Running Man Ep-282 Myanmar Subtitle
မစ်​ရှင်​နာမည်​က​ရေခဲရွာ​လေး၏လျှို့ဝှက်​ချက်​များပါ။​ရေခဲရွာ​လေး၏လျှို့ဝှက်​ချက်​ဆိုတဲ့အတိုင်း​ရေခဲ​တွေကြားမှာကစားရမှာပါ။မစ်​ရှင်​ပုံစံက​တော့သူတို့​နေတဲ့​ရေခဲရွာကိုဆုံးမကြီးကဖျက်​ဆီးသွားလို့​နောက်​ဆုံးသူတို့ရွာမှာဂျီဟို မိသားစုနဲ့ အ​ဆောင်းမိသားစုဘဲကျန်​ပါ​တော့တယ်​။ဂျီဟိုနဲ့အ​ဆောင်းက​တော့မိသားစုနှစ်​ခုလုံးရဲ့အ​ထွေးဆုံးညီမ​လေး​တွေပါ။အကို​တွေကလည်းညီမ​လေး​တွေကိုအရမ်းချစ်​ကြတာ​ပေါ့။ပထမဆုံးမစ်​ရှင်​ကညီမ​လေး​တွေကိုအိမ်​​ဆောက်​​ပေးရတာပါ။ဘယ်​မိသားစုက​ဆောက်​​ပေးနိုင်​မလဲ?။ဒုတိယမစ်​ရှင်​ကငါးဖမ်းပြီးရတဲ့အမည်​​တွေနဲ့ဟင်းချက်​ရတာပါ။​ကဲ...​နောက်​ဆုံးမစ်​ရှင်​က​တော့သူတို့အကို​တွေကို​တောထဲလွှတ်​လိုက်​တဲ့အခါမှာအကုန်​လုံး​ပျောက်​ခြင်းမလှ​ပျောက်​သွားပါတယ်​။ညီမ​လေး​တွေက​ကောဘယ်​လိုကြိုးစားရှာ​ဖွေမှာလဲ။အကို​တွေကလည်းဘယ်​လိုလွတ်​​မြောက်​​အောင်​ကြိုးပမ်းမှာလဲ။ပြီး​တော့သူတို့ကိုဖမ်းသွားတာ​ကောဘယ်​သူလဲဆိုတာ​ကို​တော့ကွကိုယ်​​ဒေါင်းကြည့်​ကြပါ။
Running Man Ep-305 Myanmar Subtitle
Guest(s): Lee Soo Min, Lee Kyung Kyu, Jo Se Ho, Kim Dong Hyun, Kim Jun Hyun, Lee Jung Jin, Yoo Jae Hwan
ပွဲစဉ် ၁ မှာတစ်ယောက်က မဲနှိက်ပြီး ကျတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုယ်ဟန်လုပ်ပြတဲ့သူရဲ့ ပါးစပ်ကို ကော်စွပ်တပ်ပြီး ပြောပြရတာပါ။..(ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်ဖွက်တမ်းကစားသလိုပေါ့။)..ဒုတိယပွဲက အစုံပလုံဘောလုံးကန်ခြင်းနဲ့ တတိယပွဲမှာ WWE smack down နပန်းပေါ့။ တယောက်ခြင်း စက္ကန့်ခြောက်ကြာရင် တယောက်စီထွက်ပြီး ထုံးစံတိုင်း နာမည်ကဒ်ခွာရတာပေါ့။...ကဲဘူတွေနိုင်မလဲဆိုတာ ကွကို​ဒေါင်းကြည့်ကြပါ။..(Avenger မှာ ဗလကြီးတွေပါတယ်နော်။)
Running Man Ep-247 Myanmar Subtitle
အပိုင်း၂၄၇ပါ။Happy Kwang Soo Dayဆိုရင်​​တော့အားလုံးပဲသိကြမှာပါ။စာလုံး​ပေါင်းသတ်​ပုံမှား​နေတာ​လေး​တွေရှိရင်​ခွင့်​လွှတ်​ပါလို့​ပြောပါရ​စေ။
မစ်​ရှင်​မှာက RMအဖွဲ့ဝင်​၆​ယောက်​ကို PDကအရင်​​တွေ့ဆုံပြီး ဂွမ်​ဆူကအဓိကဇာတ်​​ကောင်​ဆို​ပြောပြထားပါတယ်​။သူတို့ကို သစ္စာ​ဖောက်​ခဲ့တဲ့သစ်​ကုလားအုတ်​ကို လက်​စား​ချေရမယ့်​အခွင့်​အ​ရေး​ပေါ့။ကဲလက်​စ​ချေမှုက​တော့စတင်​ပါပြီ။ပတမမစ်​ရှင်​မှာကတည်းကအဖွဲ့ဝင်​၆​ယောက်​ကဂွမ်​ဆူ့အိမ်​သွားပြီးစ​သောင်းကျန်းပါပြီ။မစ်​ရှင်​​တွေကလည်းအ​တော်​ရယ်​ရပါတယ်​။ဂွမ်​ဆူ့​အောက်​ခံ​ဘောင်းဘီရှာခိုင်းတာ​ရော၊ကွန်​ပျူတာထဲရှာခိုင်းတာ​ရောစသည်​ဖြင့်​​တော်​​တော်​ရယ်​ရပါတယ်​။ဒုတိယမစ်​ရှင်​မှာကဧည့်​သည်​ကိုရှာပြီးလက်​ကို​ခေါင်း​ပေါ်တင်​ကာဧည့်​သည်​နဲ့အတူအသည်းပုံလုပ်​ရမှာပါ။ဧည့်​သည်​ကဘယ်​သူဆိုတာအဖွဲ့ဝင်​​တွေအကုန်​သိပါတယ်​။ဂွမ်​ဆူ့လည်းသိပါတယ်​။ဒါမဲ့ဒုတိယမစ်​ရှင်​ကိုဘယ်​သူ​အောင်​မလဲဆိုတာ​တော့​ဒေါင်းကြည့်​ကြပါ။တတိယမစ်​ရှင်​က​ရေကန်​ထဲမှာ​ဆော့ရတာပါ။adminအကြိုက်​ဆုံးမစ်​ရှင်​ပါ။​ရေကန်​​ပေါ်ကခုံ​တွေ​ပေါ်မှာထိုင်​ပြီးဂွမ်​ဆူကနံပါတ်​​တွေ​ပြောလိုက်​တာနဲ့အဲ့နံပါတ်​မှာထိုင်​တဲ့သူက​အောက်​ပြုတ်​ကျမှာပါ။​နောက်​ပိုင်းဘယ်​လိုဆက်​ဖြစ်​မလဲဆိုတာ​တော့ကွကိုယ်​​ဒေါင်းကြကြပါ။(အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်​သူက​တော့ လင်းထက်​ဦးပါ။)
Running Man Episode 299Guests: Block B's Zico, Yoo...
162 - King of Idols (Super Super HOT)MYANMAR SUBTI...
Running Man Episodes -298 (Myanmar Subtitle)Guest(...